စျေးအကြီးဆုံးကားတွေကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့ KPop Idol များစာရင်းမှာ ဘယ်သူဗိုလ်စွဲနေသလဲ…? | News Bar Myanmar
စျေးအကြီးဆုံးကားတွေကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့ KPop Idol များစာရင်းမှာ ဘယ်သူဗိုလ်စွဲနေသလဲ…?
Idol တွေကတော့ လျှမ်းလျှမ်းတောက်အောင်မြင်လာတာနဲ့အမျှ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကလဲ ကြောက်ခမန်းလိလိ တိုးပွားလာလျက်ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ယောက်ျားလေး idol တွေကတော့ ကားနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဝါသနာကြီးတတ်ကြပါတယ်။
Mnet ရဲ​့ TMI News အစီအစဉ်ကနေ စျေးအကြီးဆုံး ဇိမ်ခံကားနဲ့ စွမ်းရည်မြင့်ကားတွေကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့ idol များစာရင်းကို ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီစာရင်းမှာ နံပါတ် (၁) နဲ့ဗိုလ်စွဲနေတဲ့ idol ကိုခန့်မှန်းကြည့်ရအောင်။
ဟုတ်ပါတယ် အားလုံးထင်နေတဲ့အတိုင်း G-Dragon ပါပဲ။ ဒီလိုစာရင်းမှာ နံပါတ် (၁) ဖြစ်နေတာလဲ GD လို သူ့ရဲ့သီချင်းမူပိုင်ခွင့်တွေနဲ့တင် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဝမ် ၁.၄ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၁.၂ သန်းကျော်) ရနေသူအတွက် ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။
G-Dragon မှာတော့ တန်ဖိုးမြင့်လှပါချည်ရဲ့ဆိုတဲ့ ဇိမ်ခံကားတွေတင် ၃ စီးရှိပြီး သိပ်မစီးဖြစ်တဲ့ကားတွေလဲ များစွာရှိပါသေးတယ်။ ပထမဆုံးကားကတော့ Bentley limited edition ဖြစ်ပြီး ဝမ် ၃၉၀ သန်း ($330,000) တန်ပါတယ်။
နောက်တစ်စီးကတော့ Lamborghini ဖြစ်ပြီး ဝမ် ၅၇၀ သန်း ($480,000) တောင်ရှိပါတယ်။ တတိယကားကတော့ အားလုံးရဲ့အိပ်မက်ဖြစ်တဲ့ Rolls-Royce ဖြစ်ပြီး တန်ကြေးအနေနဲ့ ဝမ် ၇၄၀ သန်း ($625,000) ရှိပါတယ်။
သဘောကတော့ G-Dragon မှာ အခြားသော သိပ်မသုံးဖြစ်တဲ့ကားတွေမပါပဲ အသုံးအများဆုံးကားသုံးစီးနဲ့တင် ပိုင်ဆိုင်မှုက ဒေါ်လာ ၁.၃ သန်း (ကိုရီးယားဝမ် ၁.၆ ဘီလီယံ) ရှိနေပါတယ်။
ဒါတင်မကသေးပဲ သူ့ရဲ့ထသွားထလာ အဝတ်အစားတစ်ထည်ကလဲ သာမာန်လူတွေရဲ့ တစ်လစာဝင်ငွေလောက်ရှိပြီး လက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့အိမ်ကလဲ ကိုရီးယားဝမ် ၉ ဘီလီယံ ($7.5 သန်း) တန်ပါတယ်။
G-Dragon ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအချို့ကို သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ netizens တွေဟာ ‘နောက်ဘဝတော့ GD အဖြစ်မွေးလာပါရစေ’ ‘လူအများစု တစ်ဘဝလုံးမပိုင်နိုင်မယ့် ကားကို GD က သုံးစီးတောင်ပိုင်တယ်’ ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်တွေနဲ့ အရွှန်းဖောက်ထားကြပါတယ်။
Next အားလုံးကိုအရည်ပျော်သွားစေမယ့် SELPINK ရဲ့ Ice Cream ထက်ချိုမြိန်တဲ့ ပေါင်းစပ်မှု »
Previous « Debut တစ်နှစ်ပြည့်အနေနဲ့ ပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတဲ့ X1 အဖွဲ့ဝင်များ